Ogaden News Agency (ONA) – Halganka Gobanima-doon Bilowga ilaa Dhamaadka Wuxuu kala Miiraa Dadweynaha Halgamaya – Xarbi Adan
Halganka Gobanima-doon Bilowga ilaa Dhamaadka Wuxuu kala Miiraa Dadweynaha Halgamaya – Xarbi Adan
Sideedaba Halgan dhibkiisa oo badan & dheeftiisa oo aad u durugsan bulsho kuma dag dagto illaa dani ku hogaamiso keynaankaas aan lahayn meel loo hoydo & goob lagu sii nasto.
Halgan xornimo doon ah markii sharax laga bixiyo waa mid ayna sargoyn karin qormadaydan kooban, laakiin markii halgan lagu raadin xoriyad ay bulsho bilaabayso waa goorta ay ogaato bulshadaasi in ay ku sugantahay gunimo, shaqsiyaadka ugu horeeya ee diida dhibka bulshadaas lagu hayo ee garata in ayna u qalmin meeqaanka ay ku sugantahay bulshadaasi inta ayna qaadan go’aankaas qalafsan ee qofkasta uu ogyahay inuu yahay go’aan adag, waxay falanqeeyaan duruufaha ku nigaxan bilaabida halgankaas sida; caqabadaha, turunturooyinka ka hor imaan kara iyo waliba saadaalin wadada loo marayo xoriyadda ay rajayn xubnahaasi.
Waxay qiimeeyaan cududa gumaysiga & jawaabta uu ka bixin go’aanka ay bulshada ee ah inay ka xorowdo gumaysigiisa. Markii doodan la gudo galo waxaa markiiba miiska kusoo urura mishkilado badan oo aan loo bilaabi karin halgan wakhtigaas, marka oo la fiiriyo cududda cadawga, sida ay u soo dhawaynayaan bulshada halganka laga dhex bilaabi, sida looga gaashaaman karo dagaalka uu cadawgaasi ku ekayn doono bulshada, maal iyo muruq waxay markaaas kooxdan yar ee Halganka bilaabi gacanta ku hayaan.
Dadku way kala adkaysi badan yahiin, sidoo kale way kala Indheergarad sanyahiin yahiin waxaa markiiba ka faliidhma kooxdaas hawsha isla soo qaaday shaqsiyaad ku raacsanaa markii hore in ay xaq tahay raadinta xoriyada, laakiin markii ay arkeen duruufaha ku gaadaaman, iyada oo aan la gaadhinba raadintii xoriyada halganka la bilaabi doono ayay la qumanaan waydaa taladii ay jeexa ku lahaayeen. Waxayna markiiba go’aankooda ku soo gororiyaan in aan wax halgan ah la unki karin. Geesta kale koox waxaa dadkaas kasoo dhex baxda geesinimo iyo garasho dheeri muujisa oo Allaah-na(SWT) garansiiyo Geerida iyo noloshaba in Ilaahay Qadaray cidkasta dhib, dheef iyo dhimasho waxii loo qaddaray mudan yahay, Guushana uu Allaah Solonsiiyo Cidii mutaysata, sidaas darteed intii ay cabsida iyo caloolyowga iska ilaawaan ku gudoonsada in halganka lagu raadin xoriyadda bulshada uu xaq yahay meel lagaga dhuuntana ayna jirin.
Kooxdan markii ay halganka bilaabayeen waxay go’aansadeen in ay u dhintaan una dhibtoodaan dalkooda iyo dadkooda sharaftiisa si bulshadoodu ugu noolaato gobonimo. Inta badan qofka halgamaaga ah waxaa farxad u ah in inta uuna dhiman in uu arko dadkiisa oo xoriyad doon ah oo garab taagan una hiilinaya halganka xaqa ah ee uu wado, guusha iyo xoriyada inuu gaadho ama uu gurto midhaha halganka isaga rajo wayn kama qabo. Baahida balaadhan ee loo qabo xoriyada & falalka foosha xun ee uu gumaysigu ugu falcelinayo gobonimo doonka maalinkasta waxaa ugu soo biiraya halganka dadwayne badan oo ninba arini ugu darantahay. waxay isugu jiraan Hugun raac, haasaawe doon, hanti doon, hebel raac, magac doon, madax doon, mid maalin gumaysigu uleeyay ama adhi uu ka kaxaystay gumaysi, mid meel uu ka huluusho waayay martabooyinka gumaysigu bixiyo, mid aan fikrad badan ka haysan dhibka iyo dheefta halganka & Halgamaaga Birlabka ah ee ay u bidhaamayso xoriyadu.
Halgan waa xaalad adag oo nolosha bulshada galinaysa cidhiidhi, sidii qof Gabi dhagaxyo ah uu kusoo dumay oo nafta meel uu ula ciiro waayay deetana uur ku jirtu sanka, afka iyo meelkasta oo duleesha ka timid ayuu halganku badayaa dadweynaha uu ka dhex socdo noloshooda Silic & saxariir, xagan gabi xagan gabi gunti walac ah. Waa sidii iyada oo dhinac kasta dab kaagaga soo hulaaqay oo dhirtii oo dhan ee kugu hareeraysnayd oloshay dabaysha xaggaaguna afuufayso dhankaad u carartaba Danbaaburadu ku leefayso. Waa mid aad ku waayayso naftaada, caruurtaada, hantidaada iyo waliba umadaada qayb ka mid ah, oo maalin kasta cadawgu si naxariis daro ah u layni. Xanuunkaas badan iyo dhibaatooyin dhibaatooyin dul fuuleen waa astaamaha halganka waxayna wada saamayn halgamaaga, gumaysi kalkaalka, iyo kuwa yidhaahda anagu dhinacna ma taageersanin, waxaa ka dhasha tafantoof iyo tafaraaruq xun oo is nacsiiya Wiil iyo Hooyadii, sidoo kale kala go’doomiyaha Marwo iyo Ninkeeda. Maanta waxaa jooga waxaan shalay la arag Barri waxaa iman arin aan Maanta joogin oo dhamaantood ciqaab iyo burburin kuwada abtirsada.
Mar waxay joogtaa yaa halganka taageera, maalin waxay joogtaa yaa la dhashay shaqsiga halgamaya, maalin waxay joogtaa magaalooyin iyo umado la gubayo, la bara kacin, maalin waxay joogtaa iyada oo cirka iyo dhulkaba laqa garaacayo magaalooyinka & miyiga, qofkasta soo xasuusan Maalinta qiyaame ee dadku meel ay u cararayaan iyo meel ay ka cararayaan ayna garanayn ruuxkasta uu si argagax ah u cararayo. Guushu waxay kasii shishaysaa intaas marxaladood ee aan taxay. Xaaladahan adag waxaa maalinkasta ku hadhaya koox ka mid ah kuwaa aan sare ku sheegay ee ujeedooyinka kala duwan u soo huluushay xayndaabka Gobonimo doonka, waxaa miirman ninkasta oo aan yool fog lahayn. Marka ay ka qolof dhacaan halganka cidkasta oo aan xanuunka halganka & foosha xoriyada u adkaysan karin, waa maalinta ay isu soo siibtaan halgamaaga runta ah gumaysigu, waa maalinta ay soo dhawaatay dhalashada xoriyadu.
Sida muuqata shiishka Halgamaaga runta ah waxuu hayaa meel fog, kamana leexanayo ilaa uu guusha gaadho. Laba goor ayuu halgamaagu guulaystaa:
1- Marka isaga oo u halgamaya dadkiisa sharaftooda uu ku dhinto sababta halganka, isaga oo gudan haya waajibka Allaahna uu saaray isna uu Aqoonsaday
2- Marka uu ka gudbo caqabadahaas badan ee halganku leeyahay uuna ku dhex sugnaado xajiinta halganka ilaa cimri ku simo guusha kama danbaysta ah, Maalinta xoriyada waa maalinta kaliya ee halgamaagu Wadnahiisu galow dhaho, laabtiisu dhaqaaqdo, indhahiisana ilmo kasoo baxdo, waa maalinta uuna u adkaysan karin farxada iyo shucuurta guusha ee Calanka oo la sudhayo.
Halgamaagu laba mar ayuu xanaaqaa, 1.Marka ay dadkiisu la fahmi waayaan wanaaga iyo sharafta ay leedahay xoriyadu ayna ka hiiliyaan, iyaga oo garab joogsan gumaysiga ama ay u liicaan dhibka gumaysigu kaga hor joogo xoriyadooda.
2. Maalinta Rag & Gabdho uu ku dhaadan halgamaagu gacanta gumaysiga ku dhintaan ama ay ku dhacaan. Halgamaaga dhabta ah sadex Marxaladood mid unbuu ku suganyahay; Guluf dagaal, God aakhira iyo Gacan Cadaw, sidaas darteed qabashada Halgame Sulub Cabdi Axmed & Halgame Cali Xuseen, Ma ah arin ugub ah ee waa mid ka mida marxaladaha sadexda ah, sidoo kale ma ah mid Halganka Ogadeenya ka socda hoos u dhigi. Waa laba Halgame oo ka mid ah dadweynaha faraha badan ee doonaya xoriyada, Waxayna gacanta gumaysiga galeen iyaga oo ku sugan jidkii xoriyada. Laakiin waa mid cabsi galin & rajo xumo ku beeraysa fulayga & kuwa ku hanjaba turun turoorinyinka halgamaaga, waa mid dulayn haysa kuwii lahaa waa la daalay,Geesta kale waa mid cadawad & Geesimo hor leh galinaysa Wadaniga dhabta ah, Waxaa wadiiqadaas ku taagan dadweynahii ay ka mid ka ahaayeen oo cadho iyo carcar hor leh ay galinayso qabashadoodu.
W/Q Xarbi Aden